Ku hel shaqo duuliye diyaaradeed mahadnaq boggan | Qalabka bilaashka ah
Raadi shaqo duuliye diyaaradeed mahadnaq boggan
Thanks to tirada badan ee shaqada ee maalin walba la fidiyo ficil ahaan nooc kasta oo shabakad ah, duubista diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ayaa ah amarka maalinta, tan awgeed maahan wax lala yaabo in dad aad u tiro badan raadso duuliyeyaasha qaarkood diyaaradaha aan duuliyaha lahayn inaad qabato nooc ka mid ah shaqo mushahar leh iyo tan kale, duuliyeyaasha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee doonaya in la shaqaalaysiiyo qof uu isku maaweeliyo isagoo duulaya mashiinkooda qaaliga ah.
Taasi waa sababta dad badani u raadinayaan inay noqdaan duuliye diyaaradeed oo ay nolol ugu helaan xirfaddan cusub ee mustaqbalka weyn higsaneysa.
Waxaa loo maleynayaa in dhowr sano gudahood, 10% qaybta duulista hawada ayaa ka koobnaan doonta diyaaradaha aan duuliyaha laheyn iyo howlaha la xiriira aaladahaan, wax dad badan layaab ku noqday iyo dariiqa mustaqbalka ee kuwa kale.
1 Maxay qaadataa si loo noqdo duuliye diyaaradeed?
2 Halkee laga helaa dalabyo shaqo oo ah duuliye diyaaradeed?
Maxay qaadataa si loo noqdo duuliye diyaaradeed?
Taasi waxay tiri, inbadan oo idinka mid ah ayaa layaabi doonta waxa ay ku qaadaneyso duulista diyaaradaha aan duuliyaha laheyn. Ugu horreyntii, waa in la ogaadaa in adeegsiga diyaaradda aan ku koobnayn xirfad ama qaddar lacag ah, taas oo ah, sida laysinka wadista, qofku wuu isticmaali karaa gaariga isagoon haysan liisanka wadista iyo isla habka hab duuliye ayaa wadi kara diyaarad aan duuliyaha lahayn isaga oo aan haysan rukhsadaha u dhigma. Tani waxay matali kartaa dhibaato weyn mustaqbalka fog maadaama ay jiraan diyaarado badan oo drones ah oo loogu talagalay carruurta iyo aalado ay wataan carruurta kuwaas oo, si macquul ah, aan haysan wax ogolaansho ah oo ay ku duuli karaan qalabkan.
Simplify3D hadda sidoo kale Isbaanish
Laakiin aan qiyaasno inaynaan carruur ahayn iyo waxaan dooneynaa inaan nolol ku helno duuliye diyaaradeed. Xaaladdan oo kale, marka hore waa inaan tagnaa websaydhka rasmiga ah ee AESA, Wakaaladda Amniga Duulista Hawada ee Gobolka. Websaydhkan waxaan ka heli doonnaa tusaha koorsooyinka si aad u noqotid duuliye diyaaradeed. Websaydhkani waa muhiim maxaa yeelay marka lagu daro inuu yahay hay'adda kaliya ee rasmiga ah ee Isbaanishka ka jirta ee nidaamisa wax kasta oo khuseeya duuliyeyaasha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, waxaa kale oo ku jira waxyaabo lagu gudbo imtixaanka tijaabada ah ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo astaamaha imtixaanka. Imtixaankan waxaa weheliya, waa inaad soo bandhigtaa caddeyn caafimaad oo aan ku jirno xaalad jireed oo qumman.
Haddii aan ka gudubno imtixaanka, waa inaan iska diiwaangelinnaa websaydhka AESA sidii duuliye rasmi ah oo aan duuliye lahayn, Nidaam bilaash ah oo waxa kaliya ee nooga baahan doonaa waa inaan ka gudubno dib u eegista qalabkayaga waqti ka waqti.
Sidaad u aragto, qawaaniinta duuliyaha aan duuliyuhu aad uga duwanayn qawaaniinta liisanka wadista iyo, in badan, kharashka ayaa ka yaraan kara liisanka wadista laftiisa.
Halkee laga helaa dalabyo shaqo oo ah duuliye diyaaradeed?
Waqtigan xaadirka ah waxaad la yaabi doontaa meesha laga helo shaqada waxay bixisaa sida duuliyayaal aan duuliye lahayn. Intaas ka hor, marka hore waxay ku habboon tahay in la caddeeyo shaqooyinka lagu qaban karo kaarka noocaas ah.
Hada Spain, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn waxaa loo adeegsadaa warbixinnada sawir qaadista, iyada oo qayb ka ah falalka Adeegga Ilaalinta Madaniga ee Isbaanishka, si loo baaro aagagga ballaaran ee dhulka, jahwareerka beeraha, sahaminta hawada ama sahaminta qadiimiga ah.. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa ujeedooyin kale laakiin xilligan lama adeegsan ama kuma jiraan xeerarka, waxaan tixraaceynaa dhaqdhaqaaqyada sida qaadista walxaha, howlgalka oo ah dayaxgacmeedyo yaryar ama ujeeddooyin kale oo looga hadlayo carwooyinka waaweyn. ama maamulayaasha shirkadaha waaweyn ee teknolojiyadda.
Sida loo demiyo Raspberry Pi
Taasi waxay tiri, way cadahay in shaqadu ay tahay mid sare, aad u sareysa taasna waxay noo ogolaaneysaa inaan ka helno shaqooyin meelo kala duwan: ka soo qaad boodhadhka caadiga ah ee shirkadda halka ay ku qoran tahay "Duuliyaha Drone ayaa doonayay" illaa bogga shaqada sida InfoJobs. Laakiin sidoo kale waxaa jira bogag shabakado ah oo loo sameeyay ujeedkan, oo ah bixinta dalab shaqo oo culus duuliyayaasha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
Iyadoo fikradani ku dhalatay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.io, bog degel aad raadiso ku dheji duuliyeyaasha xiriirka la leh xiisaha adeegyada noocan ah. Haddii aad ku wareejiso bogga waxaad arki doontaa sida ay laba siyaabood u galaan, ama adoo ah qof daneynaya adeegga ama, adoo adeegsanaya codsi diiwaangelin ah, iska diiwaangeli iyada oo ah duuliye diyaaradeed oo aad bilowdo helitaanka dalabyo qandaraasyadaada ah. Shaki la'aan dadaal ka xiiso badan.
Shaki la'aan fikrad ka xiiso badan inkasta oo xilligan la joogo ay run tahay inay aad u badan tahay juquraafi ahaan xadidan adoo aqbalaya kaliya meelaha juqraafiyeed ee Mareykanka. Duuliyayaashu, markii la diiwaangeliyo, waxaa loo kala saaraa ilaa 11 qaybood oo kala duwan halkaas oo aan ka aragno aroosyada, xafladaha, isboortiga ... oo awood u leh inay duuliyaha ku bixin karaan adeegyadiisa ama saacaddii shaqada ee la qabtay.
Ikhtiyaar kale oo ku hadla Ingiriisiga ayaa ah 3drpilot, degel aad u xiiso badan oo aan kaliya ka heli doonin shaqo helis laakiin waxaan sidoo kale ka heli doonnaa gole awood leh oo ku saabsan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
Degello ku yaal Isbaanishka sidoo kale way jiraan laakiin arrintan marka laga hadlayo kaliya laba bog ayaa taagan: Pilotando.es y dronespain.pro. Waxay yihiin bogag ay weheliyaan duulimaadyo badan oo duuliyayaal ah iyo waliba adeegsadayaal doonaya inay shaqaaleeyaan duuliyaal khabiir ah ama ugu yaraan duuliyeyaasha aan duuliyaha lahayn ee leh ogolaanshaha u dhigma
Si tartiib tartiib ah shaqooyinkaan shaqo waa sii ballaaranayaan, sidoo kale baahiyaha duuliyeyaasha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo duuliyeyaasha aan duuliyaha lahayn lafteeda. Si aad fikrad u hesho, Waxaa jira ku dhowaad 9.000 duuliyayaal diyaaradeed oo nidaamsan dhammaan Midowga Yurub, taasi waa, oo leh dhammaan waraaqaha rasmiga ah iyo rukhsadaha, suuq dhan 700 milyan oo qof. Imisa ayaad kasban kartaa adigoo ah duuliye diyaaradeed?
Tani waa barta ay dad badani daawan doonaan oo laga yaabo inay tahay barta ay ku yar tahay macluumaadka iyo tixraacyada. Websaydhyada la xiriira koorsooyinka tijaabada ah ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa ku dhiirraday taas duuliye ayaa heli kara mushahar sanadle ah 100.000 oo euro, wax macquul ah haddii aad runtii tahay xirfadle ku dhex wareega guud ahaan Midowga Yurub dabcan, waad u oggolaan kartaa naftaada inaad u kala gooshto waddamada oo aad sii joogto intaad shaqeynayso. Taasi waa in la yiraahdo, shaqo aad u fiican laakiin sidoo kale aad qaali u ah.
Kuwa ugu macquulsan, taasi waa, kuwa kaliya u gudbi doona Spain, celceliska mushaarka duuliye diyaaradeed ayaan dhaafi doonin 2.000 oo euro guud ahaan bishii.
Tani waa sababta oo ah howlaha loo baahan yahay duuliye diyaaradeed inay yar yihiin.
Isbaanishka, duuliye diyaaradeed wuxuu nolol ku heli karaa shaqaale ahaan, waxaa shaqaaleysiisay shirkad u baahan adeegyada duuliye diyaaradeed ama kaligiis, isagoo wariye madax banaan oo u soo bandhigaya inuu qabto shaqo ama howlo la xiriira diyaarad drone ah. Xaaladda dambe, duuliyaha aan duuliyaha lahayn wuxuu leeyahay suuq badan isagoo leh hawlo badan oo uu qaban karo, laakiin sidoo kale waa run in waqtigiisa aan lagu soo dallaci karin qiimo sare maadaama uusan kasban doonin xitaa mushaharka ugu yar maadaama qof caadi ah uusan bixin doonin duuliye diyaaradeed oo ah 2.000 oo Euro ama ka badan si uu u raadsado beer ama u sameeyo fiidyow magaalo.
Haddii ay shaqaaleysiiso shirkad, mushaarka marka lagu daro inuu ku dhowaado ama ka badnaado 2.000 euro bishiiba, waxaa jira nabadgelyo uusan iskiis u shaqeystuhu lahayn oo ah in bil kasta uu heli doono isla mushaharka, ha lahaado ama ha lahaado waxqabad. Sikastaba xaalku ha ahaadee, iyadoo la tixgelinayo xaalada shaqo ee Spain iyo in duuliye diyaaradeed ay tahay xirfad cusub, mushaarka ku shaqeynta duuliye diyaaradeed ma ahan mid aad u sarreeya, xilligan.
Baahida loo qabo duuliye diyaaradeed ayaa ka jirta, kaliya maaha Midowga Yurub laakiin sidoo kale Spain iyo dalal kale oo ka baxsan EU iyo Spain. Tani waa fursad ganacsi dad badan iyo dariiqo nolol looga kasbado.
Si kastaba ha noqotee, lQawaaniinta ku saabsan isticmaalka iyo ujeedka diyaaradaha drones weli ma ahan mid aad u cad oo taasi waxay dhibaato ku keeni kartaa howlaha qaarkood, wax aan xilligan ka dhicin Spain.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, waa lagu qanacsan yahay in xirfadaha cusub ee la xiriira teknolojiyadda ay u muuqdaan kuwo aan ku lug lahayn "ku xiridda" shaqaalaha kombiyuutarka, sida inay tahay duuliye diyaaradeed Miyaanay kula ahayn?
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » Drones » Raadi shaqo duuliye diyaaradeed mahadnaq boggan
Salaan kadib, waxaan ahay duuliye diyaaradeed oo aan duuliye laheyn iyo diyaarad aan cidna wadin oo ku taal Madrid
Ku jawaab ivan martin
Hagaag, waxaan xiiseynayaa inaan filim la duubo diyaaradaha aan duuliyaha laheyn, waxaan heystaa diyaaradeyda, ruqsad tijaabo ah oo heer sare ah waxaan sidoo kale la shaqeeyaa tafatirka fiidiyaha salaan!
Ku jawaab juan antonio
Duuliyaha Drone ee AESA
duuliyaha aan duuliyaha lahayn ee AESA ee vigo
Jawaab Ramon Merino Lobato
Galab wanaagsan, magacaygu waa Ramon waxaanan ahay duuliye sare oo aan duuliye lahayn, (AESA)
Miguel Ranera sawirka meeleynta dijo
Waa salaaman tahay, waxaan ahay Miguel
Waxaan ahay sawir qaade
Anigu waxaan ahay duuliye iyo hawl wade aan diyaaradaheyga aan duuliyaha ahay
Waxaan ku duuli karaa duulimaad muuqaal ah oo ka baxsan muuqaalka muuqaalka
Hawlaha Lagu dhawaaqay
Hawlaha cilmi baarista iyo horumarka
Sawir qaadista, duubista filimka iyo sahaminta hawada (sahaminta cimilada, sawir qaadista)
Kormeerka hawada iyo dabagalka oo ay kujiraan duubista filimka iyo howlaha dabagalka dabka
Hawlgallada degdegga, goobidda iyo samatabbixinta
Jawaab Miguel Ranera
Anigu waxaan ahay Oscar David Briñez Fonseca, RPA Duuliyaha Ganacsiga ee shahaadada laga siiyay Colombia, oo leh khibrad fiidiyoow iyo sawir dusha sare ah, dhacdooyin, qaabdhismeedyo, shabakado koronto, dhismayaal.
Marka waxaan raadinayaa shaqo si aan aqoontayda ugu biiriyo kuwa xiisaynaya oo waxbadan ubaranaya.
Jawaab Oscar david Briñez Fonseca
Waad salaaman tihiin dhamaantiin !!
Magacaygu waa Rafa waxaanan ahay duuliye diyaaradeed oo heer sare ah (AESA) oo wata diyaaradaha aan cidina wadin.
Waxaan sidoo kale sameeyaa dayactirka iyo dayactirka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.
Hadda waxaan ku noolahay Palma de Mallorca.
Shirkadaha Drone ee Spain dijo
Waxaa jira degel websaydh la mid ah kii uu Juan Luis ku xusay shirkadaha ka shaqeeya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Isbaanishka ah. Gabi ahaanba waa bilaash, ma lahan wax nooc guddi ah oo macaamilku waa mid toos u dhexeeya macmiilka iyo hawlwadeenka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Waxaan u maleynayaa inay noqon karto mid xiiso leh in shaqo iyo adeeg loo helo macaamiisha codsada qiyaasaha farsamo iyo dhaqaale iyadoo loo marayo bogga Pilotando.
Kajawaab shirkadaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Spain
Waa salaaman tahay, magacaygu waa Jose Ángel, oo cinwaankiisu yahay duuliye diyaaradeed oo casri ah oo ay soo saartay AESA.
Waxaan leeyahay Phanton 4 pro RPA. Waxaan ahay shaqaale dawladeed oo ka tirsan laamaha amniga, markaa waxaan ahay qof dhab ah oo lagu kalsoonaan karo.
Murcia iyo aagga Cartagena.
Jawaab Jose Angel
GUDOOMIYAHA IYO HAWLAHA GOBOLKA ASTAURIYA
YUNEEC TYPHOON H ISAGA LEH
WILAAD KU LEEYAHAY HORUMAR DRONE TITLE oo ay soo saartay AESA
Waxaan haystaa DRONE I gaar ah Phanton 4 pro
Khibrad Tifatiraha Fiidiyowga oo leh barnaamijyo kala duwan
Xiisaynaya Sawir qaadista, Filimaynta iwm ...
Heerka Ingiriisiga C1 iyo Jarmal A2
Helitaanka juqraafi qaran iyo caalamiba
Jawaab ku bixi Daniel Fernández
hello Waxaan raadinayaa shuruudaha tijaabada shaqaalaha shirkadda
Magacaygu waa Juan Carlos. Waxaan haystaa cinwaan taxane ah 2 iyo radiophonist leh Phantón pro v2 drone iyo suurtagalnimada Inspire 2.
Waxaan haystaa liisanka wadaha. Ka sokow, waxaan haystaa shirkad maqal ah oo maqal ah si aan u bilaabo duubista mashruuc kasta.
La xiriir; gd3video@hotmail.com
Jawaab Juan Carlos Villa
Ruqsadaha duullimaadyada droneska ee Spain ayaa cirka isku sii shareeraya
Gudaha Jarmalka waxay horey u soo saareen marzipan leh daabacaad 3D ah